ताजा समाचार – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on दुर्घटनामा रेनु दाहाल घाइते, कस्तो छ अवस्था ?
दुर्घटनामा घाइते भएकी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको हाल ललितपुरको पुल्चोकस्थित सुमेरु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको टाउकोमा चोट लागेपछि टाँका लगाइएको र अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
उनी सवार प्रदेश ३–०१–०२३ च ७३१८ नम्बर गाडी शुक्रबार जावलाखेलमा दुर्घटना भएको थियो । टायर पञ्चर भएर गाडी बिजुलीको पोलमा ठोक्किन पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनाबाट गाडीको एक भागमा नराम्ररी क्षति पुगेको छ ।
गाडी गुल्मी घर भइ ललितपुरको हात्तीवन बस्ने अनिल कुमार पाठकले चलाएका थिए ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह ‘बालेन’को पहिलेको हिसाबले फेल खाएको छ । लौरो चुनाव चिह्नमा मेयर पदमा लडेका बालेनले ६१ हजार ७६७ मत ल्याएका छन्। बालेनले निर्वाचन हुनुअघि आफूले ९०८३५ मत ल्याएर मेयरमा चुनाव जित्ने घोषणा गरेका थिए । उनले पहिले जति मत ल्याएर विजयी हुन्छ भनेका थिए त्यो भन्दा २९,०६८ मत कम ल्याएका हुन् ।
तर, निर्वाचनमा आशातीत मत नखसेकाले बालेन ६१७६७ मत ल्याएर जित हासिल गरेका छन् । बालेनले आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहभन्दा २३ हजार ४२६ मत धेरै ल्याएका छन्।
सिंहले ३८ हजार तीन सय ४१ मत ल्याएकी छन् । निर्वाचनमा आफ्नो कुनै प्रतिस्पर्धी नै नभएको दाबी गर्ने एमालेका एमालेका केशव स्थापित तेस्रो स्थानमा पुगेका छन् ।
उनले ३८ हजार ११७ मत पाएका छन्। सिर्जना सिंहले केशव स्थापितभन्दा २२४ मत मात्र धेरै ल्याएकी छन्। निर्वाचन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार बिहीबार ३२ वटै वडाको मतगणना सकिएसँगै बालेन मेयर निर्वाचित भएका हुन्।
आँखीझ्याल चुनाव चिह्नमा लडेका स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीले १३ हजार ७७० मत पाएका छन्। राप्रपा उम्मेदवार मदनदास श्रेष्ठले ५ हजार ७७० मत पाएका छन् भने विवेकशील साझाकी समीक्षा बास्कोटाले ६४७ मत पाएकी छन्।
उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डंगोल विजयी भएकी छन्। उनले ६८ हजार ६१२ मत पाएकी छन्। उपमेयरमा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका रामेश्‍वर श्रेष्ठले २३ हजार ८०६ मत पाए। उपमेयरमै आँखीझ्याल चुनाव चिह्न लिएर उठेकी स्वतन्त्र उम्मेदवार विद्या श्रेष्‍ठले १३ हजार ६९५ मत पाएकी छन् भने राप्रपाकी बिनिता मगैयाले १२ हजार १४१ मत पाइन्।
No Comments on काठमाडौंमा बालेन साहले कटाए ५० हजार मत
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)ले ५० हजार मत कटाएका छन् । शुरुदेखि नै अग्रता कायम गरेका बालेन्द्रले सत्ता गठबन्धनलाई पछाडि पार्दै फराकिलो मतान्तर बनाएका हुन् ।
विजय सुवेदीलाई १२ हजारभन्दा बढी मतले हराउँदै दाहाल भरतपुरको मेयरमा निर्वाचित
No Comments on विजय सुवेदीलाई १२ हजारभन्दा बढी मतले हराउँदै दाहाल भरतपुरको मेयरमा निर्वाचित
चितवन — भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल विजयी भएकी छिन् । एमाले उम्मेदवार विजय सुवेदीलाई १२ हजारभन्दा बढी मतले हराउँदै दाहाल भरतपुरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी हुन् ।
काठमाडौंमा अब मात्र ६२ हजार मत गन्न बाँकी, बालेनको उच्च अग्रता
No Comments on काठमाडौंमा अब मात्र ६२ हजार मत गन्न बाँकी, बालेनको उच्च अग्रता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र साह (बालेन) ले ४३ हजार ८५० मतसहित अग्रता फराकिलो बनाउनुभएको छ ।
अब मात्र ६२ हजार मत गन्न बाँकी रहँदा उहाँले अग्रता झनै बढाउनुभएको छ ।
दोस्रो स्थानमा रहनुभएकी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले २५ हजार ९४४ मत पाउँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले २५ हजार ५९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
सिर्जना केशव भन्दा ८८५ मत अन्तरले अगाडि हुनुहुन्छ ।
तर सिर्जनालाई बालेनले १७ हजार ९०६ मत अन्तरले पछि पार्नुभएको छ । केशवभन्दा बालेन १८ हजार ७९१ मत अन्तरले अगाडि हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा अब गन्न बाँकी मत ६२ हजार ४९९ मात्र छ । वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंमा १ लाख ९० हजार ९८४ मत खसेको थियो ।
उपप्रमुखमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सुनिता डंगोलको अग्रता छ । उहाँले ४५८७५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) रामेश्‍वर श्रेष्ठले १५२८२ मत ल्याएर दोस्रो बन्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बिनिता मगैया ७०२३ मत ल्याउनुभएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार वेन्जीसिंह महर्जनले २१४२ मत, अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार र विवेकशील साझा पार्टीका कृति कंसाकरले १६७५ मत ल्याउनुभएको छ । मत अन्तर हेर्दा सुनिता डंगोलको लगभग जित पक्का भइसकेको छ ।
फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ, ग्यास सिलिण्डरमै २०० बढ्यो [मूल्य सूचीसहित]
No Comments on फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ, ग्यास सिलिण्डरमै २०० बढ्यो [मूल्य सूचीसहित]
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा प्रतिलिटर रु १० र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु २०० वृद्धि गरेको छ ।
पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १८०, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १६३, हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु १६६ तथा एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार ८०० पुगेको छ । निगमले यसअघि गत वैशाख ३१ गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु १० वृद्धि गरेको थियो ।
चुनाव हारेपछि काँग्रेसका निवर्तमान वडाध्यक्षले गरे सर्वसाधारणमाथि कुटपिट !
No Comments on चुनाव हारेपछि काँग्रेसका निवर्तमान वडाध्यक्षले गरे सर्वसाधारणमाथि कुटपिट !
काठमाडौं । रौतहटको कटहरिया नगरपालिका–३ का नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान वडा अध्यक्ष उमेश यादवमाथि सर्वसाधारण लाई कुटपिट गरेको आरोप छ ।
वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए ।
निर्वाचन हारेपछि उमेश यादवले छिमेकी कृषनन्दन यादव र उनकी पत्नी रिता देवीसँग झगडा गरेका छन् । झैझगडा हुँदा उनीहरूमाथि कुटपिट गरिएको आरोप छ ।
कृषनन्दन यादवको टाउकोमा चोट लागेको छ । रिता देवीको पनि शरीरमा चोट लागेको बताइएको छ । घाइते दम्पतीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटहरियामा उपचार भइरहेको छ ।
निर्वमान वडा अध्यक्ष र कृषनन्दको बीचमा पुरानो रिसिइबीका कारण सामान्य झगडा भएको रौतहटका एसपी विनोद घिमिरेले रातोपाटीलाई बताए ।
उनले भने–‘पुरानो रिसिइबिका कारण सामान्य झगडा भएको हो, पूर्व सूचनाको आधारमा प्रहरी परिचालन गरेको हुनाले ठुलो झगडा भएन ।’
निवर्तमान वडा अध्यक्ष उमेश यादवले आफूले कुटपिट गरेको अस्वीकार गरेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाले घटनाबारे छानबिन भइरहेको जनाएको छ ।
No Comments on काठमाडौं महानगरका १२ वडामा अहिलेसम्म बालेन, केशव र सिर्जनाले कति पाए मत?
काठमाडौं- महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग मतान्तर फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्। मतगणनाको सुरूदेखि नै अग्रता लिएका उनले अहिले १० हजार बढी मतान्तर बनाइसकेका छन्।
बिहीबार बिहान पौने ८ बजेसम्म काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ५४ हजार ४ सय ६६ मत गणना भइसकेको छ। सो मत गन्दा शाहले २१ हजार २२९ मत पाए। उनका प्रतिष्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले १० हजार ८६२ मत र नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले १० हजार ५५ मत पाएकी छन्।
स्थापितसँगको शाहको मतान्तर १० हजार ३ सय ६७ छ भने सिंहसँग ११ हजार १ सय ७४ छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अहिले आठ वटा टोली बनाएर मत गणना गरिरहेको छ। अहिले वडा नम्बर ४, ६, ७, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ को मतगणना भइरहेको छ। अहिले भएका सबै वडामा शाहले अग्रता कायमै राखेका छन्।
वडा नम्बर १, २, ३ र ५ को मत गणना भइसकेको छ। जसमा बालेन धेरै अगाडि थिए।
वडा नम्बर १ मा शाहले ७८३ मत पाउँदा स्थापितले ३६५ र सिंहले ४५१ मत पाएका थिए। वडा नम्बर २ मा शाहले १२१५, स्थापितले ७२८ र सिंहले ४९७ मत पाएका थिए।
यस्तै वडा नम्बर ३ मा शाहले २४०६ मत पाउँदा स्थापितले १२०३ र सिंहले ११७० मत पाएका थिए।
त्यस्तै वडा नम्बर ५ मा भने शाहले १५०१ मत पाउँदा स्थापितले १०६६ मत र सिंहले ७२७ मत पाएका थिए।
अरू वडाको मतगणना जारी छ।
प्रतिष्पर्धी स्थापितले आफ्नो घर भएको वडा नम्बर २८ मा सुरूवाती अग्रता लिएका थिए। तर शाहले मतान्तर घटाउँदै त्यहाँ पनि स्थापितलाई पछि पारे।
वडा नम्बर २८ मा १३९५ मत गन्दा शाहले ३७७ मत पाएका छन् भने स्थापितले ३४५ र सिंहले २९० मत पाएका छन्।
हेर्नुहोस् १२ वडामा कसले कति पाए :
No Comments on भरतपुरमा सुवेदीभन्दा रेणु ३ सय ११ मतले अगाडि
काठमाडौंमा ‘बालेन’ ४९ सय मतले अघि, बिहान भन्दा तीन सय मत बढ्यो
No Comments on काठमाडौंमा ‘बालेन’ ४९ सय मतले अघि, बिहान भन्दा तीन सय मत बढ्यो
काठमाडौं महानगरपालिका स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवार बालेन साहले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका केशव स्थापितलाई ठूलो मतान्तरले पछाडी पारिरहेका छन्। यो मतान्तर घण्टा घण्टामा बढिरहेको छ।
मतगणना सुरु भएयतानै यी दुई प्रतिस्पर्धीबीच मतान्तर बढिरहेको छ। र, बालेनले अग्रता लिइरहेका छन्। मंगलबार बिहानको पछिल्लो मतपरिणामअनुसार बालेनले १० हजार ४ सय १ मत प्राप्त गरेका छन्। मतगणना सुरु भएदेखिनै उनी अग्रस्थानमा छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका स्थापितले ५ हजार ६ सय १ मत प्राप्त गरेका छन्।
यसैगरी तेस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंह छिन्। उनले ४ हजार ८ सय ६८ मत प्राप्त गरेकी छिन्। राप्रपाका उम्मेदवार मदनदास श्रेष्ठ चौथौ स्थानमा छन। उनले ७ सय १४ मत प्राप्त गरेका छन्।
हेटौंडामा राप्रपाले गठबन्धनलाई उछिनो
मकवानपुर ।स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मत परिणाममा हेटौंडाको मेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार मिना लामालाई पछि पार्दै राप्रपाका दीपकबहादुर सिहले मतान्तर लम्ब्याएका छन् । सोमबार सांझसम्म १९० मतले अगाडि रहेकी लामालाई रातभरको मतगणनामा दीपकले १९८ मतले पछि पारेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको २२ हजार ८५३ मतगणना गर्दा राप्रपाका दीपकले ८ हजार २६५ मत पाएका छन् । गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार लामाले ८ हजार ६७ मत पाएकी छिन् ।
एमाले अहिले पनि तेस्रो स्थानमा रहेको छ । नेकपा एमालेले ६ हजार ५२१ मत पाएको छ । एमाले राम्रो पक्कड रहेको दाबि गर्दै आएको हेटौंडाको ४ वडाबाट पनि मेयरमा राप्रपालाई मत गएपछि एमाले तेस्रो नम्बरबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन । यो वडाबाट वडा अध्यक्षको उम्मेदवार भने अग्रस्थानमा छन् । उपमेयरमा भने नेकपा एमाले ८ हजार ३३,गठबन्धनले ११ हजार ७९१ र राप्रपाले २ हजार १० मत पाएको छ । हाल वडा नम्बर ३, ४,,५,६,१६, १७ को मतगणना जारी छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ । अहिलेसम्म २४ हजार २०० मतगणना भइसकेको छ ।ताजा मत परिणामानुसार स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)ले १० हजार ४६ मतसहित अग्रता कायमै गरेका छन् । नेकपा (एमाले)का उमेदवार केशव स्थापितले बालेनको भन्दा आधा कम मत प्राप्त गरेका छन् । उनले पाँच हजार ३१४ मत पाएका छन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी उमेदवार सिर्जना सिंहले चार हजार ६४१ मत पाएकी छन् ।
मोरङ – विराटनगर महानगरपालिकामा पाँच दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका मेयर नागेश कोइरालाले अग्रतालाई निरन्तरता दिएका छन्। मंगलबार बिहानसम्मको मतपरिणामअनुसार कोइराला निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका सागर थापाभन्दा १७ सय १९ मतले अगाडि रहेका छन्।
२२ हजार ९ सय ९५ मत गणना हुँदा कोइरालाले ७ हजार १२५ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी थापाले ५ हजार ४०६ मत प्राप्त गरेका छन्।स्वतन्त्रतर्फबाट उमेश यादवले २ हजार ४६१ मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपाका उम्मेदवार प्रह्लाद साहले १ हजार ३६३ मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेको तर्फबाट शिल्पा कार्कीले ६ हजार १७७ मत प्राप्त गरेकी छन् भने उनको निकटतम प्रतिद्वन्दी जसपाका अमरेन्द्र यादवले ४ हजार ७७ मत प्राप्त गरेका छन्।